I-China Pesticides - i-Enge Biotech
U-Enge Biotech ungomunye wabakhiqizi abahamba phambili be-agrochemical e-China, ubandakanyeka ngokukhethekile kuma-Insecticides, ama-Fungicides, ama-Herbicides, izilawuli zokukhula kwezitshalo, Umanyolo, imikhiqizo ephathelene nomsebenzi. ukuhlinzeka ngezinsizakalo ukuthola ukudla okwanele okunempilo, ukungcola okuncane kanye nezinsalela, ukuvikela impilo nemvelo, sinikeza ikhwalithi ephezulu futhi okuhle kakhulu kumakhasimende ethu, wamukelekile ukuvakashela inkampani yethu!
Yonke imikhiqizo ingaphansi kwezinga likazwelonke ne-ISO9001, futhi sisekela i-SGS nokunye ukuhlolwa komuntu wesithathu
I-EDDHA FE 6%
I-Enge Biotech itholakala eShijiazhuang Hebei, eChina. wabandakanyeka ekukhiqizeni ama-agrochemicals kufaka phakathi i-Insecticides, i-Fungicides, i-Herbicides, izilawuli zokukhula kwezitshalo nama-Fertilizers. Ithimba lethu linokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka engama-20 kokukhiqizwa kwezibulala-zinambuzane. Sekela ukubhaliswa kwezinto ezingaphezu kwe-50 (ICAMA) nangamandla amakhulu kumkhiqizo omusha we-R & D.
Sekela ukubhaliswa kwephrojekthi
Izimboni ze-Enge zilawula ikhwalithi yemikhiqizo ngokuqinile, yonke imikhiqizo ingaphansi kwezinga likazwelonke ne-ISO9001, futhi sisekela i-SGS nolunye uvivinyo lomuntu wesithathu.
Ukulima kuyinto enkulu kunazo zonke emhlabeni, ukubaluleka kwethu nenhloso yethu ukucebisa izimpilo zalabo abakhiqizayo nalabo abadlayo, ukuqinisekisa inqubekela phambili yemikhiqizo ezayo.
Ithimba lethu linokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka engama-20 kokukhiqizwa kwezibulala-zinambuzane. Sekela ukubhaliswa kwezinto ezingaphezu kwe-50 (ICAMA) nangamandla amakhulu kumkhiqizo omusha we-R & D.